Chikamu cheVagadziri veRepabheji yePoland → GUMI FOMU DZVIMBO
Kunyangwe, basa rekugadzira ibasa rakazvimiririra iro rinogona kuunza kugutsikana kwakawanda uye mabhenefiti epfuma, asi nzira yekutanga kushanda segadziri haisi nyore kana ipfupi. Pamusoro peiyo nhanho iri pachena yekudzidza uye kudzidza kwakasimba, murongedzeri anoshuvira anofanira kunge ari weIARPChikamu cheVagadziri veRepublic of Poland).
Ungava sei mugadziri?
Musoro weinjiniya wekuvaka unogona kuwanikwa mushure mekupedza yekutanga kutenderera zvidzidzo. Dhigirii raTenzi muinjiniya wekuvaka rinowanikwa mushure mekupedza zvechipiri kutenderera zvidzidzo Musoro, zvisinei, haupi mvumo nekukurumidza kuita kwenyanzvi. Zvinoenderana nemutemo wePoland, munhu chete ari pachinyorwa cheChamber of Architects yeRepublic yePoland ndiye mugadziri anokwanisa kuita basa iri. Saka IARP ndiyo yega gedhi rebasa remugadziri anoshuvira kupedzisa purojekiti yake yekutanga yekutengesa.
Onawo: KANA Gadzira Award 2020 yeMetalco mhando yeiyo inopindirana bhazi pekugara, ino iri chikamu cheSMART CITY chirongwa
Iyo Chamber of Architects yeRepublic yePoland mutumbi une basa rakanyanya rakamisirwa muchirevo ndeyekuchengetedza nzvimbo uye, pamusoro pazvo, kuvaka kwadzo kunoonekwa sekwakanaka paruzhinji. Pamusoro pezvo, IARP inotarisa kushanda kwakakodzera kwehunyanzvi hwekuita basa rinoshandiswa mukuvaka uye inotarisisa mhando yehunyanzvi hwekuvaka hunoshandiswa muhunyanzvi hwekuvaka. Zviripachena, kutarisisa uku kunovhara chete nhengo dzeChamber of Architects yeRepublic yePoland. Neichi chikonzero, zvakakosha kwazvo kune wechidiki mugadziri anoda kuita yekutanga yake bhizinesi rekutengesakuva weIARP.
Mabasa nemabasa eChamber of Architects yeRepublic yePoland
Iyo Chamber of Architects yeRepublic yePoland inobatawo neakawanda mabasa akawedzerwa, ayo anosanganisira, pakati pezvakawanda: kuchengetedza basa remugadziri seyazvimiririra, kuchengetedza zita reIARP Architect, kukudziridza huwandu hwemitemo ine chekuita nebasa rebasa nevagadziri vezvivakwa, kushanda nemirairo uye kugadzirisa mirairo pamiripo yenhengo. zvakare kutsvaga kwekuunza chirongwa chinoenderana nechirongwa cheEU kumayunivhesiti ePoland.
Mukuita zvimwe zviitiko, IARP inoshanda pamwe nehunyanzvi pachako hurumende yevakavaki vekuvaka. Iyo Chamber of Architects yeRepublic of Poland inoshandawo pamwe nemamwe akatiwo mamwe masangano kuzadzisa zvinangwa zvaro. Iyo Chamber of Architects yeRepublic yePoland haina kungoita basa rekuisa mirairo yebasa uye zviyero, asiwo inobata nebasa redzidzo, resainzi, retsika uye resainzi-hunyanzvi.
Zvisinei nebasa rakapararira reIARP, rinofanira kurangarirwa kuti chinangwa charo chikuru chekuchengetedza ndechekuchengetedza nzvimbo nekuvakisa seyakanaka yeruzhinji. Zvese zviitiko uye mamiriro ese eIARP akagadzirirwa chaizvo kuchinangwa ichi, uye ese mativi mabasa anofanirwa kuoneka kwete sekuwedzera pane ino chiitiko chekutanga.
Maumbirwo eIARP ane National Chamber of Architects pamwe chete nevatongi, pamwe nemakamuri gumi nematanhatu edzimba dzevakaki.
Kodzero dzenhengo uye zvisungo
Nekuve weIARP, nhengo dzinogona kutarisira dzimwe runyararo uye kodzero dzavaisazogona kunakidzwa nazvo kunze kwekunge nhengo dzemba. Kune rimwe divi, kuve nhengo muChamber of Architects yeRepublic yePoland kunewo zvimwe zvisungo.
Mabasa aya anosanganisira: kucherechedzwa kwehunyanzvi hwekuzvibata uye kutevedzera mitemo yaro, kushandira pamwe neChamber of Architects yeRepublic of Poland, kutevedzera mitemo uye nheyo zvine chekuita neruzivo rwehunyanzvi uye mupfekesi, kutora chinhanho pane zvigadziriso zveIARP uye kubhadhara nguva dzose nhengo dzemitero.
Nhengo dzeIARP dzinotarisira kodzero nemhando dzinotevera: vanogona kushandisa zviitiko zvekuzvibatsira uye nemutemo rubatsiro rwekamuri, uye vanogona kuvimba nerubatsiro mukuvandudza kwavo hunyanzvi.
National Qualization Commission
Pakunyora nezve Chamber of Architects yeRepublic yePoland, hazvigoneke kusataura nezve National Qualification Committee. Iri basa rekupa hunhu hwehunyanzvi. Mutumbi wakasarudzika unotsanangurwa mumitemo yekamuri. Pasina mubvunzo, chero anodawo kuvaka anoshuvira kuwana magwaro ake anofanirwa kusangana neNational Qualification Committee. Uye zvakare, zviitiko zveNational Qualification Committee zvakare zvinosanganisira kutarisa kwezviitiko zvemakomiti ekusarudza, uye zviitiko zvacho zvinotsanangurwa nemutemo nemirau yazvinofanira kushanda mukati mayo.
Mari yeChamber of Architects yeRepublic yePoland
Kuti IARP iite, inofanirwa kushanda nezvimwe zvinhu. Nechinangwa chekutsigira nemari zviitwa zvaro, iyo Chamber of Architects yeRepublic of Poland inowana mari kubva kumabhadhariro ehuhengo, kubva kuhupfumi, kubva kumipiro nerubatsiro, pamwe nekubva kune mamwe mapato. Zviitiko zvehupfumi zvinogona kuitwa nemakamuri edunhu neyeNational Chamber yeIARP hazviite mashoma, zvisinei, hazvigone kuve zviitiko zvekudyara uye zviitiko mumunda wekugadzira, kuvaka, mabasa neveruzhinji nekuvandudza mabasa. Izvo zvinorambidzwa zvakadaro hazvifanirwe kushamisa munhu - zviitiko zvebhizinesi hazvifanirwe kukanganisa kusununguka kweChamber of Architects yeRepublic of Poland.
Zasi Silesian Chamber of Architectskamuri yevakagadziriiyo Gdańsk Chamber of ArchitectsChikamu cheVagadziri KatowiceChikamu cheVagadziri Krakowimba yevakagadziri chikepeimba yevagadziri ve loginkamuri yevakagadziri lublinimba yevakagadziri mu olsztynimba yevakagadziri poznańChikamu cheVagadziri veRepublic of Polandiyo Chamber of Architects yeRepublic yePolandSilesian Chamber of Architectskamuri yevakavaka masimbaChikamu cheVagadziri Warsawkamuri yevakagadziri wrocławimba yenyika yevakavakiŁódź Chikamu cheVagadziriiyo Małopolska Chamber yeVavakiMałopolska District Chamber of ArchitectsMazovia Chamber of ArchitectsMasovian District Chamber of ArchitectsOpole Dare revagadziriPolish Chamber of ArchitectsPomeranian Chamber of ArchitectsSilesian Chamber of ArchitectsSilesian District Chamber of ArchitectsWielkopolska Chamber of ArchitectsWest Pomeranian Chamber of Architects